मस्त निन्द्रामा नागरिक समाज र अधिकारकर्मी
४५२ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ फाल्गुण ३० , १०:१० बजे
महेन्द्रनगर। सोमबार भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर १३ को बर्मे चौराहमा भएको घटाना प्रति कञ्चनपुरका अधिकारकर्मी बेखबर छन् । मानव अधिकार तथा महिला अधिकारकर्मीका रुपमा चिनिएका संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि अधिकारकर्मी नै बेखबर छन् ।
महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्दले सोमबार भएको घटना प्रति आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताइन । ‘घटनाको विषयमा जानकारी छैन्, पिडित पक्षका आफन्त कसैले पनि हामीलाई जानकारी दिएन्, यस विषयमा बुझेर दोसीलाई काराबाहीको लागि पहल गर्छौं,’ उनले भनिन् ।
नागरिक समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष भवराज रेग्मी पनि उक्त घट्नाबारे बेखबर छन् । घटनाबारे नागरिक समाज कञ्चनपुरलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । ‘म विहेमा गएको छु, त्यसैले यस विषयमा बुझन सकेन्,’ उनले भने । मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने आएको संस्था ईन्सेक कञ्चनपुर साखाका संयोजक कोमलनिरजञ्जन भाटले घट्नाबारे जानकारी पाएको बताउँदै ईन्सेकले घट्नाको अध्ययन सुरु गरेको बताए ।
सोमबार महाकाली नगरपालिकाका २ युवकले भीमदत्त नगरपालिका हल्दुखालकी एक १७ वर्षीय युवतीलाई बर्मे चौराहा नजिक मोटरसाईकलबाट झारेर हिंडेका थिए । युवकहरुले चौराहामा छाडेको केही समयपछि युवति मुर्छित भएकी थिइन् । स्थानीय र झोलुंगे पुल प्रहरी चौकी प्रहरीले युवतीलाई महाकाली अञ्चल अस्पतालमा उपचारका लागि लिएको थियो ।
युवतीलाई महकाली अञ्चल अस्पातल पुर्‍याएपछि प्रहरीले युवतीलाई चौराहमा छोडेर भाग्ने युवकहरुको सोमबार खोजी गरेको थियो । युवतीलाई बर्मे चौराहमा छोड्ने मध्येका एक युवकलाई प्रहरी केही समयपछि मोटरसाइकल से३प १९८८ सहित घट्नामा संलग्न युवकलाई सोमबार दिउँसो पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर २ बस्ने १८ वर्षीय सुरेन्द्र दमाई पक्राउ गरेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले घट्ना समान्यभए भन्दै पक्राउ परेका दमाईलाई छोडेको थियो । तर, एक प्रत्यक्षदर्शीले युवतीको अवस्था खराब भएको बताएका थिए । प्रत्यक्षदर्शीले भने, ‘युवतीको हालत खराब थियो, लुगा च्यातिएको थियो र शरीरमा डाम थियो र युवतीमाथि अत्याचार भएको छ ।’ ती प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार युवति रगताम्य थिइन् ।
घटनाको प्रकृति असामान्य देखिए पनि प्रहरीले युवतीलाई महाकाली अञ्चल अस्पताल पुर्‍याएर पनि पीडितको मेडिकल जाँच गराएन् । प्रहरीले केसफाराम नगराएपछि इमर्जेन्सीमा भर्ना गरिएकी ती युवतीको मेडिकल जाँच हुन् सकेन । अस्पताल पुगेपछि मात्रै युवतीको होस आएको थियो । पारिवारिक स्रोतका अनुसार युवतीसँग प्रहरीले कुनै वयान लिएन् ।प्रहरीले ‘कुरा मिलिसकेको’ भन्दै अस्पताल प्रशासनलाई केसफाराम नदिएको अस्पताल स्रोतको दावी छ ।
प्रहरीले घटनास्थलमा देखिएको मोटरसाइकल सहित पक्राउ परेका दमाईलाई सोमबार कार्यालय समय अर्थात बेलुका ५ नबज्दै छोडेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टले युवकको कुनै गल्ती नदेखिएको बताएका थिए ।‘युवकको कुनै गलत नियत देखिएन, किशोरीलाई राम्रो नियतले झोलुङ्गेबाट ल्याएर बर्मी चौराहमा छोडेको रहेछ,’ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विष्टले भने । तर, एसपी विष्टले युवतीको शरीरमा भएको चोट र उनी मुर्छित हुने अवस्थाका बारेमा प्रष्ट पारेका थिएनन् ।
मेडिकल जाँच नै नगराइएकी युवती मानसिक रुपमा अस्वस्थ रहेको ठोकुवा एसपी विष्टले गरेका थिए । यस घट्नामा दैनिक मानसखण्ड र रेडियो महाकालीले विस्तृत समाचार दिए पनि अधिकारकर्मी र तथाकथित नागरिक समाजका अगुवाले घटना बारेमा जानकारी नै नपाएको देखिएको छ । घटना जघन्य प्रकृतिको देखिएको छ ।
प्रहरीले प्रक्रिया नै पुर्‍याएर युवतीलाई अस्पतालबाट निकालेको छ भने समातिएको युवकलाई छोडेको छ । युवतीको मेडिकल नैनगरी प्रहरीले घटनाको कुनै सूचना दर्ता नगरे पनि नागरिक समाज र अधिकारवादी भनिएकाले सूचना नै नपाउनु रहस्यमयी बनेको छ ।
प्रदीप र विशाललाई फसाउन प्रहरीले सुनाउँदैछ यस्तो कथा !
डा. केसीको अनसन नजिकिंदा महेन्द्रनगरमा पुलिस आतंक सुरु
निर्मला हत्याकाण्ड : अर्को रहस्य खुलासा !
निर्मला हत्याकाण्ड : डिल्ली विष्टसमेतका पाँच टेलिफोन अडियो क्लिप सार्वजनिक
लिज घोटाला : विरोधको झण्डा उठाउँदै युवासंघ
यो हो नेपाल प्रहरी !
किशोरीलाई छोडेर युवक फरार
पर्यटकबाट अवैध असुली गर्ने सईलाई कारबाही
यसरी भइरहेछ गड्डाचौकीमा अवैध असुली
पेस्तोलसहित एक व्यक्ति पक्राउ
कञ्चनपुरमा चाडपर्व लक्षित कडा सुरक्षा व्यवस्था